नयाँ वर्षको अवसरमा टेलिकमले ल्यायो नयाँ अफर, के–के छन् विशेषता ? – Annapurna Post News
April 12, 2022 sujaLeaveaComment on नयाँ वर्षको अवसरमा टेलिकमले ल्यायो नयाँ अफर, के–के छन् विशेषता ?
नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष अफर ल्याएको छ । विश्वभर रहेका नेपालीहरुले हर्षोल्लासका साथ पर्वका रुपमा मनाउने नयाँ वर्ष को अवसरमा ग्राहकहरुका लागि टेलिकमले अनलिमिटेड डाटा र भ्वाइससहितको नयाँ वर्ष अफर उपलब्ध गराएको हो । यो अफर चैत २९ गतेदेखि बैशाख ३ गतेसम्म उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ ।
यो अफर अन्तर्गत २४ घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिने एक एमबिपिएस अनलिमिटेड डाटा र अन नेट अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सकिने प्याक जम्मा रु. ४९ मा उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी ३ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने ६ जीबी डाटा प्याक जम्मा रु. ९८ मा खरिद गर्न सकिने छ ।
यस्तै रु. २०० देखि रु. ४९९ सम्मको एमपोस रिचार्ज गर्दा दुई दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने १ जिबीको डाटा प्याक र रु. ५०० तथा सोभन्दा बढीको एमपोस रिचार्ज गर्दा ४ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने २ जीबी डाटा प्याक पनि उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । *1415*11# डायल गरी वा ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी सो सुविधा खरिद गर्न सकिने टेलिकमको प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिए ।
हार्दिक बधाई ! पल शाहलाई सर्वोत्कृष्ट नायकको अवार्ड, नायिकामा पूजा शर्मा …-.काठमाडौं । -पल शाह वा वास्तविक नाम पूर्णविक्रम शाह एक नेपाली व्यावसायिक चर्चित अभिनेता र मोडल हुन्।
तर अहिले उनि ज’बर’ज’स्ती कर’णीको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका छन। पल शाहले सर्वोत्कृष्ट नायकको अवार्ड पाएका छन् ।चलचित्र विकास बोर्डमा आज बाँडिएको बक्स अफिस फिल्म अवार्डमा पल सर्वोत्कृष्ट नायक ठहरिएका हुन् ।
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ बाट पलले सर्वोत्कृष्ट नायकको अवार्ड पाउँदा सोही चलचित्रबाट पूजा शर्मा पनि सर्वोत्कृष्ट नायिका बन्न सफल भइन् । यस्तै, सोही चलचित्रबाट सुदर्शन थापाले सर्वोत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जितेका छन् ।
चलचित्रले वर्षकै सफल चलचित्रको अवार्डसमेत जितेको छ । अवार्ड समारोहमा निर्देशक थापा र नायिका पूजा उपस्थित थिए । उनीहरूले पललाई मिस गरेको बताए । जेलमा रहेका पल शाह उपस्थित नरहेकाले उनकाे अवार्ड पनि पुजाले थापेकी थिइन् ।
‘छोरो मर्‍यो, न्याय नमरोस्’.‘बुहारी सानैमा विधवा भइन्, नाति बाउ चिन्न नपाउँदै टुहुरो भयो,’ बलराम भन्छन् ।
May 24, 2022 May 24, 2022 suja